Zac Efron နဲ့ Alexandra Daddario တို့တကယ်ပဲ ဒိတ်နေကြတာလား ? – Trend.com.mm
Posted on April 6, 2018 April 6, 2018 by Wint
Baywatch စတား Zac နဲ့ Daddario တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒိတ်နေကြပြီဆိုတာ ဝန်ခံလိုက်ပါပြီ! အစတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကောလဟာလတွေက အခုတော့အမှန်တွေပါတဲ့။
People သတင်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေပြီဆိုတာကို တရားဝင်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘယ်အချိန်တည်းက စဒိတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က သူတို့နှစ်ယောက်အတူ ရုပ်ရှင်အတူရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဲ့။ မနှစ်က မေလတုန်းကတော့ နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးဟာ သူငယ်ချင်းထက်မပိုပါဘူးလို့ ကောဟဟာလတွေကို Daddario က ငြိမ်းသတ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းလည်း အဲ့ဒီအချိန်က Zac နဲ့ ကျွန်မက သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေလိုပဲမို့လို့ပါ ဆိုပြီး Daddario က ထပ်ပြောပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုယ်တစ်ယောက သဘောကျနေတယ်ဆိုတာ အင်စတာဂရမ်ကပုံတွေကြည့်တိုင်း ပရိတ်သတ်တွေက ရိပ်မိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Zac တစ်ယောက် ကြိုးစားနေတုန်းရှိသေးတယ်ထင်ပါတယ်။ အင်စတာဂရမ်က ပို့စ်တိုင်းကို Like ပေးပြီး ကလူကျီစယ်တဲ့ ကွန်မန့်တွေလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့မှာ Daddario အတွက် Zac က ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကိုယ်စီအတွဲတွေရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ နှစ်ယောက်သား တော်တော်သဘာကျပုံပေါ်ပါတယ်။
ပရိုတိန်းဓာတ် လျော့နည်းနေရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာပြလာမယ့် လက္ခဏာများ